खैर, जो पागल पुरानो सम्झना छैन Thundercats 80 का बाट कार्टून? पक्कै पनि, यो समय को बच्चाहरु को लागि एक खजाना थियो र खाका गेमिङ थाह. तिनीहरूले तपाईंलाई नयाँ गर्न ल्याउन स्लट मुक्त बोनस एउटै theme.This स्लट आधारित केही ठूलो cartoonish एनिमेशन र ग्राफिक्स प्रदान गर्दछ. को superheroes तपाईं पैसा boatloads ल्याउन र आफ्नो दिन बनाउन यहाँ. So spin the reels and get rollin’!
को नायक अचम्मका स्लट मुक्त बोनस कमाउन
यो एक पाँच रील स्लट भेटी छ 30 मा paylines4पङ्क्तिहरू. यो उत्तिकै रमाइलो र इनामदायी तर साथै एक अलिकति जटिल स्लट छ. यो स्लट अधिकतम जीत सम्भावित एक whopping छ 250000. तरवार, स्लट गरेको लोगो, फिर्ता scratchers, वाहन र surfboard उच्च-मूल्य प्रतीक शामिल. कम-मूल्य प्रतीक जे जस्तै मानक खेल कार्ड हो, Q, K र ऐस. स्पेस को सबै भन्दा जो सजावट लागि बस त्यहाँ छैन शीर्ष मा एक ठूलो वर्ण कब्जा छ. जंगली प्रतीक Tygra छ जो विजेता Combos गठन गर्ने अन्य सबै प्रतीक प्रतिस्थापन गर्न सक्छ.
Thundercats देखि Thundering बोनस
को Thundercats प्रत्येक, सिंह-हे, Cheetara, Panthro, जंगली बिरालो र Tygra आफ्नै को अलग बोनस संग स्लट प्रेमीहरूको इनाम. सिंह-हे अनियमित wilds भन्छन्, Tygra को विस्तार wilds सुविधा ट्रिगर. Cheetara पहिलो रील मा मुलुकमा अतिरिक्त wilds थप्न गर्दा. Panthro नक्कली प्रतीक थप्छन् र जंगली बिरालो एक 2x गुणक दुई स्ट्याक wilds प्रदान गर्दछ.
यो स्लट मुक्त बोनस पनि गर्जन पाङ्ग्रा बोनस सुविधा स्लट गर्न बोनस को आफ्नो सेट भन्छन् जो प्रदान गर्दछ.
परम गर्जनका Spins: मा स्ट्याक्ड wilds3संग रील5मुक्त spins
Mumm-Ra फ्री Spins: संग विस्तार wilds 10 मुक्त spins
Slithe फ्री Spins: साथ टाँसिएको wilds 10 मुक्त spins र5थप थप गर्न सकिन्छ.
Monkian फ्री Spins: 10 जंगली तातो क्षेत्र निःशुल्क spins
Jackalman फ्री Spins: साथ 10x एक वृद्धि गुणक 10 मुक्त spins
यसबाहेक, Snarf कुनै पनि समयमा देखा र यो अचम्मको मा जीत बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ स्लट मुक्त बोनस. को गर्जन रील बोनस सुविधा गर्न स्लट को आकार बढ्छ 8 पङ्क्तिहरू. यसैले थप पङ्क्तिहरू, थप WINS.
यो बोनस सुविधाहरू धेरै संग एक निकै इनामदायी स्लट छ. बोनस सुविधाहरू यसैले यो स्लट शुरुआती लागि सिफारिस गरिएको छैन जटिल छन्. यो अत्यधिक रमाइलो छ स्लट मुक्त बोनस जो मध्यम विचरण गर्न एक कम प्रदान गर्दछ. यो एक सभ्य RTP प्रदान गर्दछ 95.5%. त्यसैले तिमी के पर्खिरहेका छन्, गर्जनका-बिरालोहरु संग एक विशाल payday लागि तयार!